20 Hondo dzeMweya minamato inopesana nemweya wekunonoka nekushushikana | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Hondo yemweya minamato inopesana nemweya wekunonoka nekushushikana
2 VAKorinde 6:2:
2 (nekuti iye anoti, "Ndakunzwa panguva yakagamuchirwa, uye nezuva reruponeso ndakakugonesa."
Ini ndinonamatira munhu wese kuverenga chidimbu ichi ikozvino, nhasi izuva rako ruponeso, nhasi Mwari wekudenga achaparadza zvese mweya wekunonoka nekushushikana muhupenyu hwako nezita raJesu. Nhasi tichave tichiita makumi maviri emitambo yehondo yemweya yekurwisa mweya wekunonoka uye wekushungurudzika. Hapana chinokanganisa muhupenyu sekunonoka. Bhaibheri rinoti kana tariro yako ichinonoka, inoita kuti moyo urware, Zvirevo 20:13. Hakusi kunonoka kwese kwakaipa, dzimwe nguva tinofanirwa kushandisa moyo murefu kudzamara tawana zvivimbiso zvaMwari, VaHeberu 12:6. Asi nhasi hatisi kutarisa kurindira kwakadai, tiri kutarisa mhando yekunonoka kunokonzerwa nemadhimoni masimba kubva kugehena, apo dhiabhori ari kuedza kukushungurudza nekumira munzira yako kuenda pakubudirira kwako. Mwana waMwari, kana ukasa dzivisa dhiabhori, dhiabhori anokupikisa. Kuti iwe ukunde kunonoka kwemadhimoni, unofanirwa kuita minamato yehondo yemweya. Iwe unofanirwa kurwisa Dhiyabhorosi paatari yeminamato.
Muna Danieri 10: 13-21, tinoona mabatiro akaita munamato waDaniel nemuchinda wePezhiya, masimba enyika achitonga Persia. Chido chemoyo waDaniel chakanonoka kwemazuva makumi maviri nerimwe, tenda Mwari daniel haana kumborega minamato yake yehondo. Dai danieri akamira kunamata, mhinduro dzake dzingadai dzakabatwa zvachose. VaKristu vazhinji nhasi, vanoshaya kushingirira muminamato, vari nyore kwazvo kurega paatari yeminamato, Jesu akadaro muna Mateo 21: 7, bvunza uye uchagamuchira , iyo yakawedzera vhezheni yakawedzerwa 'bvunza uye ramba uchibvunza' munaRuka 18, Jesu akagovana mufananidzo wechirikadzi yakawana chikumbiro chayo kubva kuna mambo nekuda kwekushingirira kwayo. Handizive kuti chii chiri kunonoka muhupenyu hwako nhasi, chingave kuroora, vana, basa, kupora, basa uye bhizinesi kufambiswa nezvimwe ndinokukurudzira kuti usakanda mapfumo pasi pana Mwari, urwe kurwa kwakanaka kwekutenda, mira wakasimba aritari yekunamatira uye unamate nzira yako kune zvipupuriro zvako. Munamato wangu kwauri ndewe, paunenge uchiita iyi minamato yehondo dzeMweya kurwisa mweya wekunonoka nekushungurudzika, hakuna kunonoka kuchaonekwa muhupenyu hwako zvakare muzita raJesu.
1. Simba rega rega, kuwedzera nguva yangu yekufambira mberi, kuwira pasi uye kufa, muzita raJesu.
2. Dambudziko rega rega, randakaunza muhupenyu hwangu kubudikidza nekubatana kwangu nemweya wekunonoka nekushungurudzika kufa izvozvi, muzita raJesu.
3. Ndinodzima zviitwa nemasimba emweya wekunonoka muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
4. Ndinotyora zvibvumirano nekutukwa kwemweya wekunonoka pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
5. Chese chiitiko cheMweya chekunonoka pamusoro pehupenyu hwangu, nyiswa neropa raJesu.
6.Mweya wega wega weusimbe uye wekudzokera kumashure muhupenyu hwangu gamuchira moto waMwari ikozvino uparadzwe, muzita raJesu.
7. Wese mweya, inodzivirira zvinhu zvakanaka muhupenyu hwangu, iparadzwe, muzita raJesu.
8. O Ishe, ini ndinoramba makusara-pamusoro makomborero.
9. Nenyasha dzaMwari, ini handisi kuzofudza kubva pamarara mombe, muzita raJesu.
10. Ini ndinoramba kuve nemakomborero asina marara, muzita raJesu.
11. Mweya wese wekutsamwa muhupenyu hwangu, gezwa neropa raJesu.
12. Ini ndinoramba mweya wekutya, kusagadzikana uye, kuora mwoyo, muzita raJesu.
13. Chese chirevo chakashata, chiporofita kana kufanotaura, chakapihwa hupenyu hwangu nes nkhono, chinodzimwa neropa raJesu.
14. Ini ndinoramba mweya wemuswe; Ini ndinoreva mweya we musoro, muzita raJesu.
15. Ini ndinogashira kwengirozi kutakurwa kuenda uko Mwari anoda kuti ndive ikozvino, muzita raJesu.
16. Chero chakaipa chakachengetwa muhupenyu hwangu nekuda kwekudya sora, gezwa neropa raJesu.
17. Aiwa, Ishe, ndichengetedzei muukuru sezvamakaita kunaDanyeri munyika yeBabironi.
18. Ini ndinoramba makonzo anotsvedza, muzita raJesu.
19. Ini ndinoramba mweya wekunyanyisa, muzita raJesu.
20. Baba Vatsvene, vavengi vangu vese uye nhare dzavo ngavaparadzwe zvidimbu nekutinhira kwaMwari, muzita raJesu
Previous nyayaMasimba Emunamato Akasimba Kune Kufarirwa Namwari
inotevera20 Munamato Unopesana neMweya wekusvibisa
Sia Matta Tumoe Kubvumbi 23, 2019 At 4:38 am
Kunonoka kwese kwave kuri cacell muZita raJesu ini nemhuri yangu takasununguka muZita raJesu Ameni ndinofunga imi Ishe
Mufundisi Ikechukwu Chinedum Kubvumbi 23, 2019 At 5:02 am
Ameni Saka Zvinofanira kuve muHupenyu Hwako neMhuri muZita raJesu
Frances Gunyana 12, 2019 At 10:31 am
Iwo mweya wekunonoka nekushushikana muhupenyu hwangu, kuroora uye mhuri, ndinoukanzura uye ndohupa pasina simba neropa riri muropa raJesu Kristu amen
Kufambira mberi kwaEfiba Nyamavhuvhu 13, 2019 At 10:12 pm
Ndinokutendai changamire nekuda kwesimba remunamato rine simba ini ndinotenda simba rese rekunonoka rapedzwa muzita raJesu.
Kufambira mberi kwaEfiba Nyamavhuvhu 13, 2019 At 10:14 pm
Ndinokutendai changamire nekuda kwesimba remunamato rine simba ini ndinotenda simba rese rekunonoka rapedzwa muzita raJesu
Evang Chukwuedon Andrew Gumiguru 17, 2019 Na4: 54 pm
Mwari vakuropafadzei changamire nekuda kwekunakisa uku kunamatira point.
Kubva nhasi ndinotora rusununguko rwangu kubva kumweya wekunonoka nekushushikana muzita raJesu amen
Esuru Daniel Mbudzi 14, 2019 At 8:12 am
Wese mweya wekunonoka uye wekudzoka unodzimwa kubva muhupenyu hwangu muzita kana Jesu. Ameni
Ezema Edith Amuche Kukadzi 26, 2020 At 11:48 am
Ini ndinoramba kunonoka kwese kwewanano muhupenyu hwangu… Ndinoda mudiwa akanaka kuvaka imba yakanaka neni
Edza Linus Murithi Ndwiga Chivabvu 29, 2020 nenguva dza 9:48 pm
Mwari akuropafadzei wakanganisa kudaro Mwari. Ndatenda. Kunonoka kwese kusimudzirwa kwangu kunopedzwa zvachose.
Jama June 19, 2020 Pa 7: 25 am
Ameni, ndinogashirwa kununurwa kubva kumweya wega wega wekudzoserwa shure, kudzikama nekumiswa, muzita raJesu ane simba uye ndinotenda Mwari nazvo. Ameni uye Ameni.
Mabel Chikunguru 9, 2020 At 12:58 am
Uyu munamato, ndibatsireiwo manheru ano ndanga ndichinetseka uye kufunga nezve hupenyu hwangu mushure meminamato iyi ndiri kuropafadza Mwari vakuropafadzei munhu waMwari 🙏🙏🙏
Taofiq Adeniyi Chikunguru 9, 2020 At 3:27 am
Ndakashungurudzika zvekuti ndaifanira kuenda online kune minamato mapoinzi ndakasangana neminamato yako yakanyorwa. Ndakanamata uye ndichigutsikana kuti minamato yangu yakanzwiwa naMwari. Ndatenda changamire neminamato yenyu yekurudziro.
TheOrdainedOne Gumiguru 26, 2020 Pa 10: 19 am
Ini ndinoramba mweya wekunonoka, kukwana uye kudzokera kumashure muzita raJesu
Ini ndinogamuchira maropafadzo aMwari uye hurongwa hwehupenyu hwangu zvizere, muzita raJesu
Ini ndiri musoro kwete muswe, ndinotora masimba nesimba kubva kumuvengi nezita raJesu, ndinogara mumweya unopfuura nemuzita raJesu
Chipupuriro changu inzvimbo yemweya, ndinochiratidza munyama muzita raJesu
Ilemile Konan Fréjus Kukadzi 1, 2021 At 12:52 pm
PA Cumberbatch Kukadzi 4, 2021 At 5:39 pm
Ndatenda munhu waMwari, nemunamato une simba uye zaruriro mukunonoka kwemweya uye kushungurudzika; izvo zvandisina kumbofunga kumanikidza pakurwiswa nemadhimoni chiitiko chakakomberedza kushungurudzika uye kunonoka mukurarama munguva pfupi yapfuura zvave zvakanyanya. Ini ndakadzima mweya yese yekushungurudzika uye kunonoka kwave kuuya kuzopesana nemurume wangu, vana vedu, vazukuru vedu, uye iyo mhuri iyo isati yagamuchira Jesu kristu weNazareta semuponesi wako wega. Kurambidzwa hakuchinonoke munhu wese uye zvese zvakabatanidzwa zvinozadza chinangwa chavo; mweya, mweya, nemuviri uye nekugona kuzadzikisa kuda kwaMwari munaIshe neMuponesi Jesu Kristu weNazareta neMweya Mutsvene. Ameni
Martha Kukadzi 27, 2021 At 3:37 am
Ameni, ndinogamuchira kudzoserwa kwaMwari muhupenyu hwangu, minyengetero iyi yakandibatsira chaizvo, ndatenda Munhu waMwari
TK Kurume 23, 2021 At 6:43 pm
Minyengetero ine simba inonongedza zvechokwadi. Ini ndinoramba mweya wekunonoka muhupenyu hwangu muzita raJesu. AMEN! Maita basa mufundisi
Doreen Kubvumbi 13, 2021 At 6:00 pm
Ndinoramba mweya wekunonoka muhupenyu hwangu uye ndinogashira kudzoserwa muhupenyu hwangu muzita raJesu. Ameni
Ed Kubvumbi 19, 2021 At 11:22 am
JOAN Chivabvu 25, 2021 Na11: 37 am
Edith June 13, 2021 Pa 1: 04 am
Ndatenda munhu waMwari nezvi porofita zvataurwa izvi
Kelvin Chikunguru 4, 2021 At 1:17 am
Ndinosunga nekukanda mweya yose yakaipa yekunonoka muzita raJesu Amen.
Biji Chikunguru 15, 2021 At 9:35 am
Ndatenda munhu waMwari nemunamato. Ndiri mumatambudziko emari. Handina imba yekugara nevana vangu vatatu. Hapana wekutarisira. Ndokumbirawo mundinamatire.
Nelly Ohia Gunyana 13, 2021 At 7:05 am
Kunonoka kuri kukanzura zvachose kubva muhupenyu hwangu muzita rine simba raJesu Kristu amen
Olumofin Magdalene Nyamavhuvhu 13, 2021 At 10:27 pm
Thanks iwe munhu waMwari nemunamato une simba 🙏🙌
Kunamata Points Yekuzvininipisa
100 Minamato yeMinamato Inopesana neNheyo uye Simba
50 Zvinokurudzira ndima dzeBhaibheri